Oscillator Cajiib ah. Qeybta 1: fikradaha aasaasiga ah iyo calaamadaha caadiga ah | vfxAlert official blog
Oscillator Cajiib ah. Qeybta 1: fikradaha aasaasiga ah iyo calaamadaha caadiga ah
Sidaad ogtahay, ka ganacsiga isbeddelku waa istiraatiijiyadda ugu faa'iidada badan ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah , laakiin aad ayey u adag tahay in la go'aamiyo xilliga bilowgiisa iyo gaar ahaan dhammaadka. Si aan loo luminin qayb muhiim ah oo faa'iido ah sababtoo ah gelitaanka dambe ee suuqa, falanqaynta adag ee xaaladda hadda jirta ayaa loo baahan yahay iyo qiimeynta dhaqdhaqaaqa qiimaha dhaqdhaqaaqa ayaa noqon doonta qaybteeda muhiimka ah. Mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee lagu xaliyo dhibaatadan ayaa ah tilmaame Awror Oscillator (AO).
Qoraaga tilmaame Bill Williams buugiisa "New Dimensions of Exchange Trading" wuxuu u arkaa inay tahay aaladda ugu fiican ee lagu falanqeeyo dhaqdhaqaaqa sicirka suuq kasta oo maaliyadeed umana baahna wax dheeri ah ganacsiga guuleysta. Terminalka, AO waxaa lagu soo bandhigayaa qaab histogaraam ah, tiirarkiisuna ay ku kala duwan yihiin laba celcelis oo fudud Celceliska Dhaqdhaqaaqa:
MA (34, Xidhan) - MA (5, Dhexdhexaad)
Isticmaalka qiimaha celceliska (Dhexdhexaadka) halkii laga xiri lahaa qiimaha (Close) waxay siinaysaa firfircooni jilicsan, taas oo ay ugu wacan tahay 'Awesome Oscillator' wuxuu leeyahay dib u dhac xagga hooseeya, marka la barbar dhigo inta badan oscillators.
Tilmaamaha AO ayaa lagu soo daray aasaasiga aasaasiga ah ee dhammaan meheradaha ganacsiga laba-geesoodka ah ee caanka ah , sida MetaTrader, nooca aasaasiga ah wuxuu leeyahay oo keliya dejinta heerar dheeri ah iyo midabbo tiirarka histogaraam. Xaqiiq ahaan, cagaar, haddii xiritaanka baarka hadda jira uu ka sarreeyo kii hore, ka hooseeya waa casaan.
Qoraagu wuxuu ku andacooday in aysan macno lahayn in la badalo muddooyinka aasaasiga ee Celceliska Dhaqdhaqaaqa Maaddaama ay ku habboon yihiin xilli kasta iyo hanti ganacsi. Way adag tahay in lagu heshiiyo qaabaynta, iyada oo la tixraacayo jaantusyada maalinlaha ah, halkaasoo "sawaxanka" suuqa iyo tallaabooyinka mala-awaalka ee muddada-gaaban ayan si weyn u saameynayn xeeladaha dhexdhexaadka iyo muddada-dheer.
Sidaa darteed, ikhtiyaarrada leh muddooyin la-beddeli karo ayaa loo sameeyay si loogu shaqeeyo xaalado kacsan; calaamadaha binary wanaagsan ayaa laga helay isku darka 7/24 iyo 10/36.
Calaamadaha ganacsiga tusiyaha
Calaamadaha 'Oscillator Awesome', marka lagu daro isbeddelka isbeddelka, sidoo kale waxay muujinayaan bilawga suuq-geynta / iibinta, taas oo tilmaame uu leeyahay heerar ku habboon. Marka la barbardhigo RSI iyo Stochastic, waxaa jira shaandheyn calaamadaha been abuurka ah oo ah qaabka midabka histogaraam oo waxaan ka joognaa suuqa marka aysan u dhigmin calaamadaha. Sidoo kale, AO malahan wax hanti ah oo "ku dhagan" aagagga daran ee leh isbeddellada muddada-dheer.
Calaamadda ugu fudud ee heshiiska lagu furi karo waxay noqon doontaa isbeddelka midabka taariikh-diimeedka:
Furitaanka ku saabsan isbeddel, midabka baarka: cagaaran-iibso, casaan-iibin;
Fur ikhtiyaarka isbeddelka isbeddelka, histogaraamku waa inuu ahaadaa midab ka soo horjeeda. Bilowga isbeddelka ayaa laga beddelay casaan ilaa cagaar, hoos u dhac ka yimaada cagaar illaa casaan.
Williams waxay sheeganeysaa inaad soo gali karto isla marka midabku isbeddelo ka dib, laakiin gelitaanka noocan oo kale ah weli waa halis badan yahay. Isbeddelka isbeddelka ee wakhti kasta isla markiiba ma dhacayo, in muddo ah suuqa ayaa sii wadaya inuu ka soo wareego dib-u-noqosho ama wuxuu siinayaa sixitaan muddo-gaaban ah. Sidaa darteed, sida ku cad hagaha ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , sug 2-3 baararka oo kaliya markaa fur. Sidoo kale meesha kama maqna in xaqiijin laga helo tilmaamaha xilliga.
Marka lagu daro isbeddelka midabka, waxaa jira dhowr qaabab calaamado:
Calaamaddu waxay sheegaysaa in hagaajinta ama dib u celinta ay dhammaatay oo ay u badan tahay in isbeddelku dib u bilaabi doono:
Ikhtiyaarka Wicitaanka : histogaraamku wuxuu ka sarreeyaa xarriiqda eber waxaana loo sameeyay qaab astaamo ah, qaab dhismeedkiisana lagu muujiyay sawirka.
Ikhtiyaar PUT : taariikh-garaad ka hooseeya eber, dhacayo ka dambeeya ugu badnaan baarka koowaad.
Baanbeerka calaamaddu waa baarka si dhammaystiran loo sameeyay (xiran) ee histogaraam, oo midabkiisu uusan isbeddelin!
Astaamaha oscillator-ka caadiga ah ee tilmaamaya isbeddelka isbeddelka ugu dambeeya:
Ikhtiyaarka CALL : barta barta histogaraamku ka beddelo taban una beddelo baarar wanaagsan oo cusub oo ka sarreeya kuwii hore. Calaamaddu waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee cagaaran ka dib heerka kala-baxa ka soo hooseeya, Joojinta Khasaaraha waxay ku taalaa 3-5 dhibcood oo ka hooseeya baarka ugu yar ka hor barta jabitaanka.
FUR ikhtiyaarka : xaaladaha ka soo horjeedka: histogaraamku wuxuu noqdaa mid taban, bar calaamaddu waa casaan.
Sawirka, fiiro gaar ah u yeelo jabka koowaad iyo kan ugu dambeeya ee heerarka eber. Xaaladda ugu horreysa, waxaan leenahay dhaqdhaqaaq mala-awaal ah (badanaa wararka) oo si xoog leh u beddelay oscillator oo siiyay calaamado been abuur ah si loo iibsado. Xaaladda ka soo horjeedka ayaa ku taal dhinaca midig: AO calaamadda la xaqiijiyay ee qaabka laambadda oo waad si ammaan ah u furi kartaa. Markaad baraneyso sida calaamadaha ikhtiyaariga ah ay u shaqeeyaan , hubso inaad eegto xaaladda suuqa: waxaa laga yaabaa in arrimo qaar baajiyaan xitaa calaamado adag!
Kala duwanaanshaha dhaqdhaqaaqa shaxda qiimaha iyo oscillators waa mid ka mid ah calaamadaha ugu xoogan ee isbeddelka soo socda ee isbeddelka socda iyo muddada dheer foomamka kaladuwanaanta, isbeddel cusub oo xoog leh. Kala geddisnaanta qallafsan, waxaan sugeynaa barta furitaanka ee Iibinta iyo Iibsiga xamuulka.
Sawirka wuxuu muujinayaa tusaalooyin kala duwanaansho muuqda, laakiin xaaladaha noocan oo kale ah aad ayey u yar yihiin. Badanaa, kala-duwanaanta ayaa si aad ah loogu dhawaaqaa, way adag tahay in la arko iyaga oo aan lahayn tababar ku filan, gaar ahaan kuwa bilowga ah. Tilmaamayaasha gaarka ah sida 'Awror Oscillator Divergence' ayaa ku caawin kara, calaamadaha kuwaas oo noqon doona barta bilowga ee falanqaynta faahfaahsan.
Moodelkan waxaa lagu magacaabi karaa "kala-duwanaansho fidsan", taas oo ka dhalan karta dib-u-noqosho iyo sii wadida dhaqdhaqaaqa dhinac - tani waa calaamadaha ugu horreeya ee isbeddelka dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha. Calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah waa inuu muuqdaa ka hor intaanu dhaafin heerarka eber!
Ogeysiis muhiim ah: oo leh histogaraam cagaaran ma jiro wax calaamado iib ah, siday u kala horreeyaan, ma jiraan wax iibsasho ah oo ku saabsan AO guduudan. Qodobka labaad ee muhiimka ah: haddii calaamadda si buuxda loo sameeyo, laakiin aan lagu jabin qiimaha hadda, oo ay ku xigto isbeddelka midabka histogaraam, ka dib ayaa la joojiyaa calaamadda.
Qaybta labaad ee maqaalka, akhri sida loo kordhiyo kalsoonida xeeladaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee leh 'Awesome Oscillator' iyo talooyinka loo isticmaalo.